Iawa Rimwe Zuva reSocial Media ... | Martech Zone
Mugovera, Kukadzi 4, 2012 Svondo, Gunyana 30, 2012 Douglas Karr
Iko hakuna chaiko tungamirira, Nekutaura, kweSocial Media. Vazhinji vanhu vangade kukuudza zvekuita pasocial media kana vagovana zano ravo rekukunda… Asi ini ndazviona zvichishanda zvakasiyana kune angangoita ese makambani atakashanda nawo. Nhasi, Erik Deckers akagovana iyi tweet neni kubva kuna Alexander Klotz:
Zviwanikwa zvinonetsa kune wese munhu ... kusanganisira bhizinesi rangu diki. Chinangwa chedu ndechekuisa email pasvondo, maviri mablog mablog pazuva, uye kuita hurukuro muTwitter, LinkedIn, Google+ neFacebook. Tiri kukundikana zvinosiririsa! Icho chinetso chakadai kuti tiri kuhaya imwe zviwanikwa munguva pfupi yedu pasocial media agency kungoedza kuenderera. Ndicho mari yakanangana nekambani iyo ingangodaro isingagone kudzosera mari ... asi nekufamba kwenguva, ndine chokwadi kuti ichadaro.
Kune zvakawanda zviwanikwa kunze uko pane iwo musoro wenyaya. Ini ndinowanzo tendera ndichifarira Jay baer, Jason Falls uye Michael Stelzner pamusoro pevanhu vakaita Hubspot kune vezvenhau kuraira. Ndichiri kufunga kuti vanhu varipo Hubspot vane hungwaru, yavo yemukati zano ndeye yakanyanya-kubhadharisa inbound yekushambadzira zano. Ivo vanogovana ruzivo kutyaira kunotungamira kune yavo kambani. Jay, Jason naMichael vanoita basa rakakura rekugarisa mumwe munhu mutengesi achipesana (ivo vachanyatsotsanangura vatsigiri vavo) asi tarisa pane nyaya iripano uye nesarudzo dzinogoneka.
Muchokwadi, iyo nguva yakanakira Alex - kuenda kuna Michael Diki Bhizinesi Yemagariro Midhiya Kubudirira Summit pakupera kwemwedzi uno. Musangano uno nyeredzi makumi maviri neshanu enhau enhau inodzidzisa varidzi vemabhizinesi uye vashambadzi maitiro ekugona kushambadzira midhiya yenhau (yakaunzwa kwauri neSocial Media Examiner). Vatauri vanosanganisira Jeremiah Owyang (Altimeter Boka), Brian Solis (munyori, Shingairira), Frank Eliason (Citigroup), Mari Smith (co-munyori, Facebook Kushambadzira), Erik Qualman (munyori, Socialnomics), Michael Stelzner (muvambi, Social Media Muongorori), Dan Zarella (munyori, The Social Media Marketing Book), Andy Sernovitz (munyori, Shoko reMuromo Kushambadzira), David Meerman Scott (munyori, Real-Nguva Kushambadzira & PR); nyanzvi kubva kuBoing, Intel, Cisco uye Verizon; Jay baer (munyori-mubatanidzwa, Iye Zvino Revolution), Hollis Thomases (Munyori, Twitter Kushambadzira), Steve Garfield (munyori, Tora Kuonekwa), Mario Sundar (kubva kuLinkedIn), uye Ann Handley (MarketingProfs) - kungodudza mashoma. (Kuzivisa: Ndihwo hukama hwangu hwehukama).
Heano matipi angu pane kubata pasocial media pasina zviwanikwa:
Kuratidzirwa kune zvakawanda zviwanikwa zvirinani kupfuura imwe. Usateedzere chero anonzi anonzi guru. Isu tese tinoshanda nemakambani akasiyana uye takaona mamwe marongero achikunda, vamwe vachirasikirwa… uye kakawanda nzira imwechete chaiyo kuhwina UYE kurasikirwa. Shandisa 15 kwemaminitsi zuva rekuverenga zvinyorwa zvavo uye hurukuro.
Tsvaga vateereri vako. Kutevera vatungamiriri, vatinoshanda navo, uye kunyange vakwikwidzi muindastiri yako inzira inoshamisa yekuwana mukana kune vateereri vauri kutsvaga. Vatevere paTwitter, Saivo paFacebook, wedzera ivo kumatunhu muGoogle +, uye wotobatana nemamwe maLinkedIn mapoka. Mukana wekujoinha hurukuro kana iwe waita izvi unenge wakakura. Shandisa 15 kwemaminitsi zuva mukati ari hurukuro yakakosha kwauri nebhizinesi rako.
Dyara mureza wako. Kana iwe uchida kuve mutungamiri, udza vanhu kuti ndiwe mutungamiri uye nei. Haufanire kumirira kuti utumidzwe… unenge wakamirira kwenguva yakareba. Ini ndinokurudzira mabhizinesi madiki andinoshanda nawo kublogi, kutaura, uye kuratidza masimba avo. Iyo blog inopa repakati reposvo rekuti vanhu vashanyire uye verenga zvakawanda nezve iwe uye nezvako ruzivo - saka ivo vanogona kuona kana kwete kuita bhizinesi. Kutaura ipapo kunopa kucherechedzwa kwesimba rako… kunyangwe iwe ukayamwa pakutanga kwazviri! Uye kuratidza masimba ako kuburikidza nekugovana nzvimbo senge Slideshare zvinonakidza. Shandisa 20 kwemaminitsi zuva rekugadzira zvemukati.
Zvikurudzire iwe pachako. Usangonyora post, tweet kana kugadzirisa uye kutarisira vanhu kuti vauye. Iwe unofanirwa kutora iyo yekutonga yekusimudzira kwako pachako. Shandisa 10 kwemaminitsi zuva rekusimudzira zvemukati. Pakutanga, izvi zvinogona kunge zvichitsvaga mikana yekushanya blog, kutaura kana kunyange kutenga kushambadza kuti izwi ribude!
Ini handipedze zuva rese paSocial Media… kunyangwe zvingaite senge. Ini ronga blog zvinyorwa uye shandisa maturusi senge Buffer kubuda maTweets neFacebook zvinyorwa panguva dzakaringana. Kuva nefoni smartphone nezvangu zvese zvemagariro midhiya mapurogiramu ekuvandudza zvakanaka - apo ini ndinogona kusvina maminetsi mashoma pano nepapo pakati pemisangano, munzira, kana kuva nekapu yekofi ndinogona kutora chikamu zvishoma.
Chekupedzisira, uku kudyara mari ... kwete kutenga. Kupedza awa rimwe zuva hakuzo kukuwanire zvauri kutsvaga. Asi kupedza awa rimwe pazuva kwegore kuchapihwa kuti unokodzera kutariswa! Ini ndinoudza vanhu kuti vafunge nezvazvo sezvavangaita chero imwe mari… imwe posvo, yega yega tweet, yega yega yekuvandudza, fan yega yega, muteveri wega wega ... iwo ese mapeni muaccount yako. Kana iwe ukarega kuisa mari, haugone kuwana iyo yakawedzera kufarira yaunoda kuti mari iwe ubhadhare.
Kukadzi 7, 2012 na2: 57 PM
Great post! Ndinoda kuti iwe uzviputse pasi muhuwandu hunogona kugadziriswa. Ini ndinogara ndichiona vanhu vachinzwa sekunge vanoda kuve vekutanga kupindura kana kupindura. Uye kana izvo zvisinganzwe zvichikwanisika, vanorega. Kune mumwe munhu asati atanga, ndinofunga kupedza awa rimwe pazuva kwevhiki kungozvinyudza mune zviri kunze uko uye kusarudza maturusi anoshanda zvakanyanya kwavari inzira yakanaka yekutora.
Kukadzi 7, 2012 na6: 49 PM
Ndatenda zvikuru, @ twitter-116342558: disqus! Zvemagariro midhiya zvirokwazvo ibasa rakasimba, risingamire basa rine mikana yakawanda asi rinogona zvakare kunetsa. Ini ndinoona kuti 'chunking' inzira yakanaka yekubudirira kana iwe uchiedza kumedza basa rakakura kudai! Zvakawanda zvinokosheswa.
Apr 9, 2012 pa 10: 05 AM
Ini ndanetseka nekusaenzana kwevezvenhau kubva pandakatanga makore mana apfuura… kubvira pakagadziriswa nyaya iyi nemamwe matipi uye mazano. Noushamwari, Susan